अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने तयारी
काठमाडौं, २० फागुन। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पुनर्नियुक्ति हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट डा. खतिवडालाई नै पुनर्नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ ।
गएको बिहीबार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका डा. खतिवडाले फागुन २१ गते आफूले शपथग्रहण लिने जिकिर गरेका थिए। डा. खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल मंगलबार (आज) सकिँदैछ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा मन्त्री बनेका खतिवडाको मन्त्रीका रुपमा पनि कार्यकाल आजै सकिँदैछ। पुनर्नियुक्ति हुने भएपछि पुनः डा. खतिवडा नै अर्थमन्त्री रहिरहनेछन्। सांसद नभएपनि प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।